२१ औं शताव्दीकै लामो चन्द्र ग्रहण आज, नांगो आँखाले हेर्न हुन्छ कि हुँदैन ? -
मुख्य खबररोचक विश्वविविध
Home›मुख्य खबर›२१ औं शताव्दीकै लामो चन्द्र ग्रहण आज, नांगो आँखाले हेर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
२१ औं शताव्दीको सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण आज लाग्दै छ । यो चन्द्र ग्रहण करिब १ घण्टा ४३ मिनेटसम्म रहने छ । यसलाई नेपालबाट पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
चन्द्र ग्रहणको बेला चन्द्रमा रातो रंगको देखिने छ, जसलाई ‘ब्लड मुन’ पनि भनिन्छ ।
काठमाडौंका गल्ली–गल्लीमा प्रहरीको साइकल गस्ती
स्वयम्भुका अनन्तपुर र प्रतापपुर पुरानै स्वरुपमा
प्रकाश दाहालको मृत्यु
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्द
ललितपर महानगरमा अपागंता र वातावरणमैत्री फुटपाथ निर्माण(WITH VIDEO)
नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले नेकपासँग मुकाबिला गर्ने अरु पार्टी नै नभएको दाबी